Iindaba ze-EUR / ze-USD-i-Euro ukuya kwiDollar yokuqikelela urhwebo / iindaba | Funda 2 Urhwebo
NgoMvulo, nge-24 kaJanuwari, 2022
I-EURUSD yenza ikhefu lobuxoki ngaphezu kwendawo yokuchasa
Uhlalutyo lwe-EURUSD: Ixabiso lidala iNqaku loBubuxoki Ngaphezulu kwe-1.1190 Resistance Zone EURUSD idala ukuphulwa kobuxoki ngaphezu kwendawo yokuchasana ye-1.1190. Imarike ibonisa ubuthathaka jikelele ukususela ngoJuni. Ikhefu kulwakhiwo lwemarike lwenzekile emva kweeveki ezithile zokudityaniswa. Umyinge ohambahambayo phakathi kweeBands zeBollinger uqinisekise ukuqala kwe […]
Itshathi yemihla ngemihla
NgoMgqibelo, uJanuwari 22, 2022
I-EUR / i-USD iqhubela phambili ukusuka kwi-1.1300 yeNkxaso, ngoku isondela kwi-Ceiling kwi-21DMA isondele kwi-1.1350
Ukulandela i-pair rebound kwinkxaso kunye nenqanaba le-1.1300 elibandakanya, i-50-day MA ngokuchanekileyo kwi-1.1319 kunye nokunyakaza okunyukayo okuye kwancedisa imisebenzi yexabiso ukususela ekupheleni kukaNovemba 2021 Imarike ihamba ngokukhawuleza ukuya phezulu. Okwangoku, i-21DMA kwi-1.1346 iye yadala inzuzo yemihla ngemihla kunye [...]
NgoMvulo, nge-17 kaJanuwari, 2022
I-EURUSD Yonyaka ye-Forecast - IMakethi ilindeleke ukuba ibuyele kwi-1.1650 Uqikelelo lonyaka lwe-EURUSD lubhekiselele kwindawo yokumelana ne-1.1650. Unyaka wama-2020 wawukwimarike ye-EURUSD. Imali ye-euro ifumene amandla xa ithelekiswa nedola. Ngokuchasene noko kwakunjalo ngonyaka ka-2021.
NgoMvulo, nge-10 kaJanuwari, 2022
I-EURUSD Idibanisa phakathi kwamaNqanaba aPhambili
Uhlalutyo lwexabiso le-EURUSD - ngoJanuwari 10 EURUSD idibanisa phakathi kwamanqanaba abalulekileyo kwi-1.1380 kunye ne-1.1230. Imarike ijongene nobuthathaka ngokubanzi. Ekupheleni kuka-Agasti nasekuqaleni kukaSeptemba, imarike yayithengwe kakhulu. Le stochastic ibonisa ukuba imarike yayikulungele ukuhamba mfutshane. Umndilili oshukumayo oli-9 uwele ngaphezulu kwe […]
NgeCawa, nge-9 kaJanuwari 2022
I-EUR/USD Iqala ngo-2022 ngethoni eThulekileyo ngaphandle kweBullish Dollar
Iveki yokuvula ka-2022 yeza nezinto ezothusayo kwimakethi ye-forex kodwa yenza i-dent encinci kwi-euro/dollar pair. Olona loyiko luphawulekayo lweza emva kokuba i-US Federal Reserve, ngokweMizuzu ekhutshiweyo kwintlanganiso yayo kaDisemba, yaphawula ukuba iceba ukucofa iibhondi zayo kwezi nyanga zizayo. I-US […]
NgoMvulo, nge-3 kaJanuwari, 2022
I-EURUSD ibanjelwe phakathi kwamanqanaba amakhulu
Uhlalutyo lwexabiso le-EURUSD - Disemba 3 EURUSD ibanjwe kwimarike ephakathi phakathi kweendawo ezinkulu. Ixabiso ngoku lihamba emacaleni ngaphandle kolwalathiso oluchaziweyo kwixesha lemihla ngemihla. Imarike ibonwa ngokuqhubekayo ukwenza izilungiso emva kweempembelelo. Ngo-Okthobha ukuya kutsho phakathi kuNovemba, imarike yayidityanisiwe. Amanqanaba amakhulu enze ukuchasana […]
NgoLwesithathu, uDisemba 29, 2021
I-EUR/USD ixhaswe kakuhle ngaphezu kwe-1.1300 eLawulwayo, iHoliday-Slimmed Trading Conditions
I-EUR / USD, okwangoku ithengiwe kwaye ithengiswe ngaphantsi kweentloko zeveki malunga ne-1.1330, ngexesha elilawulwayo, iimeko zokurhweba ezincitshisiweyo zeeholide. Imarike yathengiswa nge-moderal bias positive kule veki phakathi kweemeko ezinkulu zengozi, ezibonakala zinzima kakhulu kwaye zibonakala zigcinwe ngokufanelekileyo ngaphezu kwe-1.1330. Ngokwenene, iintsuku ezingama-21 ezihambayo […]
Iindaba ze Forex
NgoLwesibini, nge-28 kaDisemba ngo-2021
I-EURUSD ayiqinisekanga njengoko ihleli ivalelwe phakathi kwamanqanaba abalulekileyo
Uhlalutyo lwexabiso le-EURUSD-Disemba 28 EURUSD ayinasigqibo njengoko ihlala ivalelwe ekudityanisweni ngaphezulu kwenqanaba elibalulekileyo le-1.12020. I-EURUSD ivalwe ukusuka phezulu kwinqanaba lokumelana ne-1.13840. Imakethi ihleli ingenazigqibo malunga nokuba ingenza i-U-turn okanye ijube ngaphezulu. Abathengisi kunye nabathengi, ke ngoko, kunokuthiwa bakwi […]
NgoLwesithathu, uDisemba 22, 2021
I-EUR / i-USD iBuyiselwa ngaphezu kweNqanaba le-1.1190, iFaces Rejection kwi-1.1350
I-EUR/USD Amanqanaba aBalulekileyo okuNchasa amanqanaba: 1.1800, 1.2000, kunye ne-1.2200Amanqanaba eNkxaso: 1.1300, 1.1200 kunye ne-1.1100 EUR / USD Ixabiso Ixesha elide: I-BearishEUR / USD ikwimeko ephantsi1.1350 kodwa ikwi-13 ye-downtrend. NgoDisemba 1.1221, imarike yehlile ukuya kwinqanaba le-XNUMX njengoko iinkunzi zathenga iidiphu. Isibini semali siqala kwakhona ukuya phezulu emva kwe-bearish impulse yokugqibela. Ngokufanayo, kwi […]
NgoLwesithathu, uDisemba 15, 2021
I-EUR/USD iNtuthukela kwi-1.1300, njengeDollar Stalls phambi kweNtlanganiso yeFed
I-EUR / i-USD ithengise ngemvakalelo yokunyuka ngoLwesithathu njengoko idola (DXY) ibeka kwakhona phambi kwesigwebo seFed. Okwangoku, "uLwesine oMkhulu" uya kudlala indima ebalulekileyo kwisenzo sexabiso le-euro elisondeleyo ngenxa yentlanganiso ye-ECB ezayo. Oko kuthethiweyo, imixholo yokwahlukana kwebhanki ephakathi iya kuqhuba umkhombandlela wexabiso lexesha elisondeleyo kwesi sibini. I-EUR/USD […]
IiNkokheli zeFX zeNdaba zeNdaba zeQhinga kunye namaqhinga
Yonke into oyifunayo kwiQonga leendaba le-Forex
Funda 2 Urhwebo yindawo ekujongwe ukuba ixhobise abarhwebi kunye nabatyali mali ngeenkcukacha kunye neenkcukacha ezifunekayo ukuze ube ngumntu ophumeleleyo kwilizwe lezorhwebo. Ukuze ube nempumelelo kwicandelo lokurhweba ngemali, umntu kufuneka abe nokuqonda okunzulu kweemarike zezemali kwiindawo ezininzi.
Apha ekuFundeni u-2 wezoRhwebo, sineqela leengcali ezinamava okurhweba ngokubhekisele kuzo zonke iimarike ezinkulu zezemali ezinje ngee-cryptocurrensets, izinto zorhwebo, iimali, kunye nee-indices ezijolise ekunikeni abathengisi kunye nabatyali zimali ngolwazi lwezorhwebo ngezinto ezisisiseko nezobuchwephesha. Iqela elisemva kweFunda i-2 Trade liyazi kakuhle ukubaluleka kwe-Forex broker, eya kuthi incede abasebenzisi bethu ukuba baphumelele kwilizwe lezorhwebo. Kwaye, sikuthatha njengembopheleleko yethu ukukunika ingcebiso yeengcali enokukunceda uthathe nasiphi na isigqibo.
Ayinamsebenzi ukuba ungene nje kwimarike ye-Forex okanye ukuba uqhelene nelizwe lezorhwebo, ngokungathandabuzekiyo uya kuzuza ngengcebiso yethu evakalayo enokukunceda wenze isigqibo esingena ngxaki.
Zonke izinto zeFX, 24/5
Sithatha uxanduva lokukunika elona cebiso leengcali ukuze inkqubo yokukhetha umrhwebi ofanelekileyo ibelula kakhulu kwaye ayinangxaki kangako. Sisebenzisa ulwazi lwethu, amava, kunye nobuchule bokuthengisa ngokwenzuzo yakho; Ukubonelela ngamava angabinangxaki xa kuziwa kumanqanaba kunye nokuvavanya umrhwebi ngamnye we-Forex ukukunceda ufumane amandla kwishishini lakho lokurhweba, kwangaxeshanye kukunceda uphephe nayiphi na impazamo enokukuhlawula ingalo okanye umlenze ecaleni ikunika zonke iindaba zeFX zamva nje.
Ukuhlaziywa kokugqibela: Matshi 11th, 2020